अदालतमा लामिछानेविरुद्ध पेश गरिएको अभि’योगपत्रमा के छ? - ।। Naya Kuro ।।
९ भाद्र २०७६, सोमबार १३:०८ August 26, 2019 Naya KuroLeaveaComment on अदालतमा लामिछानेविरुद्ध पेश गरिएको अभि’योगपत्रमा के छ?
न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेविरूद्ध आफ्नै पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आ’त्मह’त्या गर्न बाध्य हुने परिस्थिति खडा गरेको अभि’योग सहित सरकारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। लामिछाने सहित उनको कार्यक्रम चलाउने युवराज कंडेल र ‘रूकु’ भन्ने अस्मिता कार्कीलाई पनि दुरूत्साहनको अभि’योग लगाउँदै आइतबार जिल्ला वकिलको कार्यालय चितवनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूलाई ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले मुद्दा दायर गरेको हो।
सेतोपाटीलाई प्राप्त अभि’योग पत्रमा चारवटा कुरालाई मुख्य आधार मानेर पुडासैनीलाई आ’त्मह’त्या गर्न दुरूत्साहन गरेको दाबी गरिएको छ। अभि’योगपत्रमा पुडासैनीले आ’त्मह’त्या अघि खिचेको भिडियो, अस्मिता कार्की ‘रूकु’को बयान, लामिछाने र कंडेलको बयान र पुडासैनिकसँग नजिक केही व्यक्ति बयानलाई मुख्य प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आ’त्मह’त्यापछि पुडासैनीको मोबाइलमा उनले खिचेको भिडियो भेटिएको थियो। जसमा यूवराज कंडेलले अष्ट्रेलिया जान केटी मिलाइदिने भनेर कार्कीलाई आफूसँग जोडिदिएको बताएका छन्। कंडेलले हेप्न थालेपछि न्यूज २४ टिभी छोडेको त्यसपछि पनि उनले आफूलाई ‘तँ फसिस्’, भन्दै धम्क्याएको पुडासैनीले भनेका छन्। अदालतमा दायर भएको अभि’योगपत्रमा यो भिडियोलाई महत्वपूर्ण प्रमाण मान्दै त्यसमा पुडासैनीले भनेका सबै कुरालाई समेटिएको छ।
यो प्रमाणलाई अस्मिताको बयानले पुष्टि गरेको अभि’योगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आफूले लामिछाने र कंडेलसँग मिलेर पुडासैनीलाई ब’लात्का’र केसमा फसाइदिने ध’म्की दिएको अस्मिताले प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेकी छन्। उनले न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यालयमा आफू गएको फोटो पुडासैनीलाई पठाएकी थिइन्। फोटो पठाउँदै अब कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भनेर आफूले उनलाई बताएको बयानमा भनेकी छन्।
‘प्रतिवादीले न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यालयको फोटो समेत खिची मृ’त’कको बारेमा कार्यक्रम प्रशारण गरिदिने भनी ध’म्की दिएको कुरा स्वीकार गरेकी तथा सो अनुसार निजले मृ’त’कले आ’त्मह’त्या गर्नु भन्दा केही दिन अगाडि पठाएको सो फोटो मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ’ अभि’योगपत्रमा उल्लेख छ।
कार्कीले प्रहरीसँगको बयानमा विवाहित पुडासैनीले आफूलाई अविवाहित भन्दै धो’का दिएको बताएकी छन्। आफूलाई धो’कामा राखेको थाहा भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको, र पनि पुडासैनिले पीछा नछोडेको पनि बयानमा भनेकी छन्। त्यसपछि पुडासैनीको पिछा छोडाइदिन क्यामेरामेन अनिल ढुंगेलमार्फत लामिछाने र कंडेललाई अनुरोध गरेको बयान दिएकी छन्। पुडासैनीसँगका मेसेज र अन्तरंग फोटोहरू ढुंगेललाई पठाइदिएको उनको बयानमा उल्लेख छ।
यो कुरा ढुंगेलले पनि प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेका छन्।
कार्कीले पठाएका ती मेसेज आफूले कंडेलसमेतलाई दिएको भन्दै ढुंगेलले प्रहरीमा कागज गरेको अभि’योगपत्रमा उल्लेख छ। कंडेलले भने यी सबै कुरा इन्कार गर्दै बयान गरेका छन्। तर कार्की, ढुंगेल र लामिछानेको बयानले उनको इन्कारी बयानलाई नै खण्डित गर्ने सरकारी वकिलको दाबी छ।
समाचार बनाउने क्रममा कंडेलले पुडासैनीलाई गाली गर्ने कुरा लामिछानेको बयानबाट देखिएको अभि’योगपत्रमा उल्लेख छ। कंडेलले आफ्नो कार्यक्रम छोडेर अर्को टिभीमा समानान्तर कार्यक्रम चलाउन गएको रिसिवी साँध्न कार्कीसँग मिलेर पुडासैनीलाई धम्क्याएको दाबी अभि’योगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
लामिछानेले पनि आफूले पुडासैनीलाई आ’त्मह’त्या गर्न दुरूत्साहन नगरेको भन्दै बयान दिएका छन्। अभि’योगपत्रका अनुसार, अरूले नै आफूले कार्यक्रम बनाएको भनिदिएको हुनसक्ने आशंका भने उनले बयानमा गरेका छन्।
‘प्रतिवादी रवि लामिछानेले पुडासैनीलाई आ’त्मह’त्या गर्न दुरूत्साहन दिएको तथा सो अनुसारको परिस्थिति खडा गरेकोमा इन्कार भइ बयान गरेको भएतापनि आफूले निजको विरूद्धमा कार्यक्रम बनाएको कसैले भनिदिएको समेत हुनसक्छ र आ’त्मह’त्या गरेको हुन सक्छ भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ,’ अभि’योगपत्रमा उल्लेख छ।
लामिछानेको यो बयानलाई अन्य प्रतिवादी, साक्षी र प्रमाणले खण्डन गर्ने दाबी पनि अभि’योगपत्रमा गरिएको छ। आफूले पुडासैनीलाई धम्की दिएको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेकी कार्कीले कंडेल र लामिछानेले पनि ब्ल्याकमेल गरेको हुनसक्ने भन्दै उनीहरूलाई मुछेकी छन्। उनको यही बयानले पुडासैनीले लामिछाने विरूद्ध भिडियोमा लगाएको आरोप पुष्टी हुने अभि’योगपत्रमा उल्लेख छ।
‘मृ’त’कसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि मेसेज र अन्य कुराकानी सेयर गरिदिएपश्चात निज अनिल ढुंगेल, युवराज कंडेल र रवि लामिछाने सो सम्बन्धमा सल्लाह गरी योजना बनाई निज शालिकराम पुडासैनी हतोत्साही हुने किसिमले व्ल्याकमेल गरी केही कुरा भनेको वा केही कार्य गरेको हुनुपर्छ, त्यसैले पुडासैनीले आ’त्मह’त्या गरेको हुनुपर्छ भन्दै सहप्रतिवादी कार्कीले बयान गरेको देखिएबाट यी प्रतिवादीको इन्कारी बयान खण्डित भएको तथा प्रतिवादीको भूमिकाबारेमा मृ’त’कले भिडियोमा खुलाएको विषय पुष्टि भएको छ,̕ अभि’योगपत्रमा भनिएको छ।
यसबाहेक प्रमिला शर्मा भूषाल भन्ने एक महिलाले पुडासैनीलाई आफूले अन्तिम पटक हतास अवस्थामा देखेको भन्दै प्रहरीमा कागज गरिदिएकी छन्। प्रेमिकाले न्युज २४का मानिससँग मिलेर फसाउन खोजेका छन्, रेपमुद्दा हाल्ने समेत भनेका छन्, मर्नुअघि हतास अवस्थामा भेटिएका पुडासैनीले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै भूषालले यस्तो बयान गरेको अभि’योगपत्रमा भनिएको छ।
सबैको बयान जोड्दै प्रहरी र सरकारी वकिलले पुडासैनीको भिडियो पुष्टी गरेर लामिछाने सहित तीनजनालाई उनको आ’त्मह’त्यामा दुरूत्साहन मुद्दा लगाएको हो।
पुडासैनी आ’त्मह’त्या प्रकरण स् २२ बर्षे जवान अस्मिता दुधले नुहाएकी होइनन् ? पहिला दुवैले मोज गरे अहिले आएर‘
माइसंसार डटकममा उमेश श्रेष्ठ (शालोक्य)ले “चितवन पुगेपछि मैले देखेको रवि प्रकरण” मा एकजना पाठक टिका दत्त शिव नामबाट प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको प्रतिक्रया साह्रै घतलाग्दो छ । हेर्नुहोस उनको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै
मलाई लागेको कुरो कतिलाई तितो लाग्दो हो, जुन यस्तो छ:
कुरो बिग्रिएको शालिकराम कि श्रीमती सम्झनाले शालिकराम र अस्मिताको रास’लिला थाहा पाएदेखि हो । सम्झनाले थाहा नपाउञ्जेल दुबै (शालिकराम र अस्मिता) ले मो’ज गरे । जब थाहा भयो त्यसपछि अस्मिता आफैले शालिकरामबाट टाढिन खोजिन । जुन शालिकरामका लागि सह्य भएन ।
यहाँ २२ बर्षे जवान अस्मिता दुधले नुहाएकी छैनन् । उनलाई शालिकराम विवाहित हो भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । नत्र उनी कुनै पुरुषसंग सजिलै कोठामा बस्ने थिइनन् । उनले काम गर्ने ठाउँमा समेत सबैले श्रीमानरश्रीमति भन्दा पनि उनलाई आ’पत्ति थिएन ।
आ’पत्ति तब भयो जब शालिकराम कि श्रीमतीले यिनीहरुको खेल थाहा पाइन । अस्मितालाई डर भयो सम्झनाले थाहा पाएपछि सम्झनाले यिनीहरुलाई बाँकी राख्ने छैनन । यहि वीच ट्रेण्डिङ्गमा रहेको छविरशिल्पा काण्डले पनि अस्मिताको दिमागमा स्ट्राइक गर्यो ।
आफ्नो हविगत पनि त्यस्तै हुने पिर लाग्न थाल्यो । अब आफ्नो क्यारियरलाई समेत दाउमा राखेर शालिकरामको पछि लाग्नुको कुनै अर्थ थिएन । त्यसैले अब उनी शालिकरामबाट छुटकारा पाउन चाहन्थिन । तर आफ्नो श्रीमतीलाई समेत धो’का दिईरहेका शालिकराम अस्मितासँगको अवै’ध सम्ब’न्धमा यति नि’र्लिप्त भैसकेका थिए कि श्रीमतीले पनि थाहा पाउनु र अस्मिताले पनि छोडेपछि उनी विक्षि’प्त भए ।
शालिकराम विक्षि’प्त भएपछि रातोदिन अस्मितालाई पछयाउन थाले । त्यसबाट छुटकारा पाउन अस्मिताले रवि लामिछाने र उनको टीमलाई आफ्नो कहानी सुनाईन र शालिकरामबाट छुटकारा दिलाउन हार गुहार गरिन । रविलाई के थियो उनी यस्ता का’ण्ड भण्डाफोर गर्न माहिर खेलाडी ! त्यसमाथि, कुनै बेलासंगै काम गर्ने साथी, त्यो पनि अर्को च्यानलमा उस्ताउस्तै कार्यक्रम गर्ने प्रतिस्पर्धीका बारेमा यस्तो खबर पाउँदा उनको नेचरले उनलाई नकुत्कुत्याई रहन सकेन ।
त्यसैले रविले बकाइदा अस्मितालाई नपछ्याउन शालिकरामलाई ध’म्कि दिए । नत्र तिम्रो भण्डा’फोर हुन्छ, बल’त्कारको केसमा पर्छौ, अस्मितालाई छोडेनौ भने तिम्रोबारेमा कार्यक्रम बनाउछु भनेपछि शालिकरामलाई रिस, चिन्ता, डिप्रेसनले एकै पटक गाज्यो र खापिसक्नु भएन ।
अनि आफुलाई पिडा’दिने जति सबैलाई पोलेर आ’त्मह’त्याको बाटो रोजे
आ’त्मह’त्या नै किन रोजे भनेर भन्दा यो लधुकथा बुझौ –
एउटा गाउँमा एउटा दुष्ट रहेछ । म’र्नेबेलामा प्रायश्चित गर्दै गाउँलेलाई भनेछ ‘मैले तपाईंहरुलाई साह्रै दुस्ख दिए, यो सब मेरो मुखले गर्दा हो । अब म म’रेपछि मेरो मुखमा बाँसको ठेंडि कोचिदिनु होला । त्यसो गर्नुभयो भने मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ ।
गाउँलेले त्यसै गरेछन ।
पछि पुलिसले उसको ‘सुसा’इड नोट’ भेटेछ, त्यसमा लेखिएको रहेछ – ‘मेरो मुखमा बाँस कोचि(कोचि ‘गाउँलेले मलाई मा’रे ’!? अर्थात, दुष्ट दुष्ट नै हो । श्रीमती हुँदहुँदै गर्लफ्रेनसँग बस्नु दु’ष्ट्याइं नै हो भने अहिलेका जीवित तिनै अभियुक्तहरु पनि दुष्ट नै हुन् । अब सबैले गच्छे अनुसारको दण्ड सजाय पाउनै पर्छ । अनि मात्र न्यायको जित हुन्छ ।
लागु पदार्थ, रक्सी आदिको लत बरु छुट्ला र त्यति हानि नगर्ला जति पर स्त्रीरपुरुष गमनको लतले बर्बाद बनाउछ ! इज्जत, धन सबैथोक स्वाहा मात्रै पर्दैन अनाहक ज्यानै पनि जान्छ !
एयर होस्टेज हुँ भनी फेसबुकमार्फत ठगी गर्ने महिला पक्राउ
प्रहरी र रवि लामिछाने समर्थक बीच भरतपुरको चौबिसकोटीमा झडप
एनसेलले आफ्ना ग्राहककाे लागि सुलभदरमा डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा प्रदान
१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०६:२० October 2, 2020 Naya Kuro
चितुवाको आक्रमणबाट २२ महिने बालकको मृत्यु
१५ पुष २०७६, मंगलवार ०८:५८ December 31, 2019 Naya Kuro
११ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:४७ September 27, 2020 Naya Kuro